Fanafody an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika | Tontolo alika
Monica Sanchez | | curiosities, aretina
Ny fitohanana dia olana mety hitranga amin'ny biby rehetra, ao anatin'izany ny alika. Ny antony tsy tokony hialana amin'ny fahasahiranana dia antony maro no mahatonga izany: tsy fihinanan-tena, tsy fanatanjahan-tena, na koa fiainana tsy mipetrapetraka. Inona no azo atao?
Raha manana olana amin'ny fimontsina ara-dalàna ny volonao, dia arosonay ireto fanafody an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika.
1 Inona avy ireo soritr'aretin'ny fitohanana amin'ny alika?
2 Fitsaboana ao an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika
2.1 Oliva menaka
2.2 Sakafo fibre
2.3 Rano sy sakafo lena
Inona avy ireo soritr'aretin'ny fitohanana amin'ny alika?
Ny alika salama dia tokony hialana farafaharatsiny indray mandeha na indroa isan'andro, tsy misy fahasarotana ary, noho izany, tsy mahatsapa fanaintainana. Fa rehefa voatohina ianao dia inona no hitranga dia izay himenomenona ny biby isaky ny manala otrikaina izy, satria ho ezaka lehibe handroahana na dia seza kely dia kely aza izany.
Amin'ity toe-javatra ity, ny volom-borona mety hahatsapa ho malahelo sy tsy misy lisitra, amin'ny teboka izay, amin'ny tranga tena lehibe, afaka mijanona tsy mihinana. Noho ireo antony ireo, raha hitanao fa tsy mikotrika zaza ao anaty iray na roa andro ny namanao, dia tena ilaina ny mitandrina sy mitsabo azy, amin'ny fanafody ao an-trano aloha ary raha tsy mihatsara amin'ny andro fahatelo izy, dia misy fanafody sasany notendren'ny mpitsabo biby.
Ny vahaolana mahomby amin'ny tranga manokana amin'ny fitohanana dia omeo menaka oliva iray sotro lehibe tsy mihoatra ny telo andro misesy. Satria mety tsy tiany izy dia azonao afangaro amin'ny sakafony.
Ny ataon'ny menaka dia ny "menaka" ny tsinainy, manalefaka ny seza amin'ny fomba izay tiana ny fandroahana azy.
Imbetsaka ny fitohanana no miseho rehefa tsy misy fibre. Mba hisorohana na hanamboarana azy, azonao omena ny alikao sakafo izay manankarena ao aminy, toy ny voatavo sy karaoty. Voaketaka tsara sy afangaro amin'ny haninao, mety ho voavaha ny olan'ny fivontosanao.
Rano sy sakafo lena
Ny tsy fahampian'ny tsiranoka dia antony iray hafa mahatonga ny fitohanana. Araka izany, Tsy maintsy manana rano madio sy madio foana ny alika, ary ilaina koa ny hanome azy sakafo lena satria misy rano 70-80%.
Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia manampy amin'ny fiasan'ny tsinay tsara. A) Eny, ilaina ny mamoaka azy mitsangatsangana isan'andro, tsy hoe mba manana fahasalamana tena tsara ianao, fa mba hahafahanao mandeha any amin'ny trano fidiovana ihany koa isaky ny mila izany ianao nefa tsy mahazo aina.
Raha tsy mahita fanatsarana ianao ao anatin'ny telo andro farafaharatsiny aorian'ny nisehoan'ny olana dia mankanesa any amin'ny mpitsabo biby hanadihady ny namanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fitsaboana ao an-trano ho an'ny fitohanana amin'ny alika
Alika famonjena, mihoatra ny fanampiana fotsiny